Wararka Maanta: Arbaco, July 28, 2021-Xildhibaan sheegay in xukuumada Somaliland u adeegsatay sirdoonka Itoobiya
Xildhibaanka ayaa sheegay in 5 nin oo katirsan ciidanka sirdoonka Itoobiya ugu yimaadeen makhaayad ku taala magaalada Addis ababa isla markaana xidheen waaran la'aan.
"Shalay aniga oo fadhiya kafateeriya Gaarisa la yidhaa ayay 5 nin oo katirsan sirdoonka Itoobiya ii yimadeen, waxay igu yidhaahdeen soo kac, waxan ku idhi waaran maad wadataan, waxay igu yidhaahdeen mayee saldhiga ayaanu kuugu sheegi waxanu kaa rabno" ayuu yidhi.
"Katiinad ayay wateen waxay damceen in ay isaaraan gaadhi xaajiyad ah, wuxuu Alle nagu guuleeyay in aanu u yeedhno askar booliis ah oo wadada maraysay, markaa niman Axmaariga garanayay ayaa ku yidhi, nimankani ninkan ayay xidhayaan markaa waxaanu idinka codsanayna in aad saldhiga isku gaysaan".
"Ciidan sirdoon ah oo lagu shaqaysanayo ayay ahaayeen, haybtoodiina waala garanaya oo nin reer Jigjiga ah ayaa ku jiray, saldhiga ayay i geeyeen suunkii iyo kabihiina way iga saareen, mobiladiina way iga qaadeen, kii Soomaaliga aha baa igu yidhi dollar ayaad waddanka soo galise danbigaaga iska qiro" ayuu hadalkiisa kudaray.
Xildhibaanka ayaa ku andacooday in xukuumada Somaliland ay isticmaashay ciidanka sirdoonka Itoobiya iyadoo usoo dhexmartay xafiiska Somaliland ee Addis ababa isla markaana la doonayay in lagu afduubo Addis ababa.
"Markii lala hadlay waxa soo baxday in ay ahayeen niman halkan laga waday, ninkii Soomaaliga aha ayaa la hadlay sirdoonka Itoobiya waxayna ku yidhaahdeen ninkaa anagu mahaysane dowladiisa ayaa haysata, wasaarada arrimaha gudaha Somaliland ayaa safaarada usoo martay" ayuu yidhi.
Xildhibaan Mustafe ayaa ku andacooday in sababta loo raadsanayaa ay tahay in uu taageersana qaar ka mida xubnaha ay isbahaysa mucaaradku u sharaxeen doorashada shirgudoonka wakiilada Somaliland, isagoo sheegay in uu si buuxda ugu biiray isbahaysiga mucaaradka.